Iidlo ezifanelekileyo kakhulu ezithandwa ngabafazi abaninzi, kuquka iinkwenkwezi ze-movie kunye ne-supermodels. Imenyu kunye neengcebiso.
Izidlo ezifanelekileyo kakhulu: eziphezulu ezi-5
Ukutya okufanelekileyo ngokuxhomekeka komzimba
Abaninzi abasetyhini abanobunzima obunzima, bayazibuza ukuba zeziphi iindlo ezifanelekileyo kunye nokuba ngaba kukhona ukulinganisa. Phakathi kweengcebiso ezininzi zokutya okunomsoco, i-mono-diet, iprotheni, i-carbohydrate, kunye nabanye, kunzima kakhulu ukuchonga abo baphumelele ngokwenene.
Kodwa kukho izidlo eziye zavavanywa ngabasetyhini abaninzi kwaye zibonakalisa ukuba azikwazi nje ukukhokelela ekulahlekeni kwesisindo, kodwa futhi azibangazilimaza kwimpilo (kwaye oku kudla ngokubakho ngokuguqulwa okutshiweyo ekudleni).
Ukutya okudibeneyo okusebenzayo
Uluhlu lwezidlo ezingcono ezinikwe ngezantsi zingabangela ukuphikisana nokubambisana ukuba kukho abanye, nangona bengaziwa kakhulu, kodwa akukho msebenzi ophantsi. Nangona kunjalo, ekukhetheni sasikhokelwa yinqanaba lokutshisa amafutha, inani lokuhlaziywa okulungileyo kunye nokusabalalisa.
Abasunguli bokutya ngaphandle kokuba iisiseko zikholelwa, yintoni kanye intsalela ye-carbohydrate kwisintu ikhokelela ekutheni ubunzima bunzima. Ewe, umzimba ungasenamandla okwaneleyo ukutshisa yonke i-carbohydrates engenayo. Ngaloo ndlela, ngokunciphisa imveliso enjalo kwaye kungabi nciphisa yonke into, kunokwenzeka ukuba ulahlekelwe isisindo ngokupheleleyo ngaphandle kokulimaza kwimpilo kwaye uhlale unobuthathaka ngenxa yokungondleki. Umgca wokugqibela kukuba i-carbohydrate ingena emzimbeni ngenani elincinci. Ukutya kwamaprotheni (inyama, amaqanda, iimveliso zobisi) azilawulwa. Ukongeza, ungadla imifuno neziqhamo ezingenamkhawulo.
Imenyu ngosuku olunye:
Isidlo sesidlo - 400 g (inkukhu, inyama yenkomo, ingulube ngaphandle kwamafutha) ubilise ngaphandle kweryuwa uze uhlule kwiindawo ezine zokutya. Njalo ixesha kufuneka udibanise isonka kwiimifuno ukuya kwenyama, othanda ukuyila. Unako ukusela i-decoction ye-wild rose okanye i-compote yezithelo ezomileyo ngaphandle kweshukela
Igama libonisa ukuba lisetyenziswe ngeenkwenkwezi zaseHollywood ukuba zizenzele isimo phambi kokuba zithathe izenzo ezintle. Nangona kunjalo, ngokukhawuleza ukulahla i-fat excess for a week does not work out - ukutya kulungiselelwe iiveki ezimbini. Yaye nangona yena, ngokweendlela ezininzi zeenkwenkwezi ze-movie, ezona zilungileyo kwihlabathi, ziya kubhekana nemida emininzi. Ngaphantsi kwesithintelo iphuma ityuwa, iswekile (kubandakanywa kwimveliso) kunye notywala.
Ukutya okusebenzayo kuhlose ukwandisa ukutya kokutya kunye nomthamo weprotheni kunye nemali enkulu. Kuvela ukuba ngosuku umntu ufumana ubuninzi beekhalori ezingama-800, ezincinci kakhulu. Ngaloo ndlela, ubunzima buqinisekisiwe ukuba bahambe, nangona uchitha yonke loo mini ulele nje embhedeni.
Siyifake kuloluhlu ngenxa yokusebenza kakuhle. Kodwa iingqinisiso zibonisa ukuba akusiwo wonke umntu onokumelana nalo.
Kuphela iintsuku ezintathu kuphela. Kodwa kulo lonke ixesha ungadla iqanda elinye kunye ne-300 grams ye-cottage ushizi ngosuku, uhlanjwe ngamanzi.
Ekuqaleni, ukutya kwakuquka ukutya kwezilwanyana ezibiza iindleko ezidliwayo, ezo zizwe eziziwayo, kodwa azinakwenzeka kubantu abaninzi. Ngokuhamba kwexesha, iimveliso ezibandakanyiweyo kwimenyu yale yokutya efanelekileyo ziye zatshintshwa ngokukhawuleza ukuhlangabezana neemfuno zabemi abaqhelekileyo.
Makhe unike umzekelo wemihla nje kuphela ukuba ube nombono oqhelekileyo weenkqubo zokwenza imenyu.
Ukutya kwasekuseni: ayitholakali
Ukutya: utamatisi, iqanda elinye, indebe yekhofi okanye itiye eluhlaza
Ukutya isidlo: iklabishi kunye nesaladi yekhukhamba, isiqingatha sesithelo seqabunga, enye inkukhu yeqanda.
Iintsuku ezintandathu eziseleyo zokutya ziye zenzelwe ukudibanisa ukutya kwiprotheni kunye neziqhamo kunye nemifuno, emva koko umjikelezo uphindwa kwenye iveki.
I-mono-kits efanelekileyo kakhulu
Bathetha ukutya imveliso ethile ngexesha elifutshane. Kwixesha elinjalo umzimba uphisa onke amanqatha amaninzi, kodwa ufumana izinto ezaneleyo zobomi obuqhelekileyo.
Iingxelo zabasetyhini abaye bahamba nale ndlela yokutya bethetha ukuba kunzima kakhulu, kodwa ngexesha elifanayo lisebenza. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zokutya kwe-kefir.
Kwiintsuku ezintathu kubalulekile ukusela kuphela i-kefir (enye neyesigidi iithayitha), ukwahlula kwiindidi ezininzi
iintsuku ezintlanu okanye ezintandathu ukusela isitha esinye nesigamu se-kefir kwaye udle malunga nekhilo yemifuno okanye iziqhamo
Ukuqwalasela yonke imimiselo, ungaphonsa kwi-kilogramgram ezili-10, kodwa ubambe ixesha elifanelekileyo kunzima. Ngeveki kufuneka udle kuphela i-buckwheat ene-steam ngaphandle kweryuwa, uhlanjwe nge-kefir ephantsi. Amanzi angadliwa ngobuninzi obungenamkhawulo.
Emva kokukhangela uluhlu, kunokwenzeka ukhetho olubhekiselele kulunye ukutya okanye ngokutya, ngokutsho komntu, ngokusekelwe kumandla okunika amandla.
Indlela yokulahla isigaba sokuqala se cellulite ekhaya?
Iklabishi kunye nelayisi kwi-multi-spray
Inkukhu kunye nama-mushroom kwi-multivark
Ukufuthwa kweenyawo ezivela ezinyaweni ezizinzileyo kubantwana
Isibindi ekhilimu omuncu
Umkhuba wokuthandana nabantu
I-Shark ibhaka kunye nemifuno
ITV kunye nabantwana